प्रधानमन्त्री देउवाले गरिदिए रेकर्ड नै ब्रेक ! – GALAXY
प्रधानमन्त्री देउवाले गरिदिए रेकर्ड नै ब्रेक !
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले रेकर्ड ब्रेक गरेका छन् । प्रायः नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री हुने वित्तीकै पहिलो विदेश भ्रमण इण्डीया गर्ने गर्दथे तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई ब्रेक गरेका छन् ।
यस अघि प्रधानमन्त्री भएका बखत देउवाले पनि पहिलो पटक इण्डीयाकै भ्रमण गर्ने गरेका थिए तर यस पटक भने संयोगले भनौँ या परिस्थितीले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण इण्डीया नभएर युरोपेली देश हुन लागेको छ।
आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले देउवाको नेतृत्वमा उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ग्लास्कोमा आगामी ३१ अक्टोबरदेखि १२ नोभेम्बरसम्म ‘कोप २६ समिट’ आयोजना हुँदैछ । उक्त समिटमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जोय बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलगायत विश्वका चर्चित नेताहरु सहभागी हुनेछन् ।
विश्वव्यापी जलवायू संकटलाई सम्वानेधन गर्ने कोप २७६ को लक्ष्य रहेको छ । सम्मेलनमा २० देखि २५ हजार जनाको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
इण्डीयन सरकारले आफ्नो दादागिरीनै देखाउँन भए पनि कुनै पनि नेपाली प्रधनमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण इण्डीयानै गरुन भन्ने चाहना राख्दै आएको छ । तर देउवाले भने इण्डीयाको त्यो चाहनालाई यस पटक पुरा हुन नदिने भएका छन् ।
एक समय तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चिनमा गरेका थिए ।
त्यसबेला प्रचण्ड पहिलो पटक चिन गए पछि इण्डीया नमज्जा सँग रिसाएको थियो । ओलम्पीकको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन चिन पुगेका प्रचण्डले पछि आफ्नो राजनितिक भ्रमणको सुरुवात भने इण्डीया बाटनै हुने भनेर प्रष्टीकरण समेत दिएका थिए ।